Tuesday March 26, 2019 - 07:05:16 in Wararka by Super Admin
Kooxo Cunsuriyiin ah oo ay ku fogaatay islaam nacaybka ayaa handadaad ku haya Muslimiinta.
Sheekh Cabdi Qani Qardhaawi oo ku sugan dalka Maraykanka imaamna ka ah masjidka Alshaafici ee ku yaala dalkaasi ayaa wareysi uu siiyay idaacadda alfurqaan wuxuu kaga hadlay heerka islaamka nacaybka uu ka gaaray dalka Mareykanka.
Wuxuu xusay in wixii ka dambeeyay doorashadii Donald Trump ay dhiira gelin iyo taageero heleen dadka ku fakarka ah madaxweynaha Maraykanka oo aanan la ganban xiqdiga uu uhayo islaamka iyo ehelkiisa.
Cabdiqani ayaa xusay in Masaajida qaar loo sameeyay ilaallo waardiye ka ah Muslimiinta ku tukanaya Masaajida.
Halkan ka dhageyso wareysiga Sheekh Cabdi qani Qardhaawi